Dagal qabow oo u bilabay marakanka… —
Home » Dagal qabow oo u bilabay marakanka…
Dagal qabow oo u bilabay marakanka…
By radiosomit.com September 22, 2021 No Comments3 Mins Read
Hadal haynta ugu wayn ee maalmahan dunida ka taagan waa kala wareegga Juqraafiga siyaasadeed (geopolitical shift) ee uu Maraykanku sameeyey iyo sida uu mid ka mid ah saaxiibbaadiisii ugu dhowaa dhabarka kaga wareemay, waa sida uu wasiirka arrimaha dibedda Faransiiska u dhigaye. Faransiiska wuxuu 2016 heshii la galay Austrlia in uu sameeyo 12 gujis oo ku kacaya adduun dhan $60 bilyan, laakiin Australia ayaa heshiiskii ka baxday, waxeyna Maraykanka iyo Ingiriiska wada saxiixdeen heshiis cusub oo loogu dhisayo Gujisyo ku shaqeeya Nukliyeerka.
Austrlia ayaa noqotay dalkii labaad oo uu Maraykanku la wadaagayo tiknoolajiyad millateri oo xasaasi ah. Ingiriiska oo qura ayaa heystay fursaddaas. Australia waxay noqon doontaa dalka 7-aad oo gujis Nukliyeer ah heysta. Waxaa heystay horraan Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya.
Heshiiska cusub oo loogu magac daray Aukus ayaa daaqadda ka saaray Faransiiska oo saaxib dhow la ahaa seddaxda dowladood.
Sababta ugu wayn ee Maraykanka ku bixisay in uu saaxibkiisa Faransiiska uu dhabarka u jeediyo ayaa lagu sheegay muhiimadda uu siinayo xakameynta Shiinaha iyo in uu ujeesto Indo-Pacific, taasoo ka dhigan in uu yaraynayo mudnaantii uu siinayey Yurub iyo Bariga Dhexe.
Tillaabadan uu Maraykanku qaaday waxay caddeyn u tahay dagaal qabow oo cusub, sida ay Shiinaha dhigeenba.
Xiriirka Maraykanka iyo Faransiisku wuxuu soo billowday sanadkii 1781, markaa uu Faransiisku ka qaybgalay mid ka mid ah dagaalladii ugu adkaa ee kacdoonkii xornimo doonka ee Maraykanka la galay Ingiriiska. Wuxuu kaloo Faransiisku Maraakiib dagaal ku hor istaagay gurmadkii Ingiriiska. Dhanka kale, Maraykanka ayaa sanadkii 1944 dagaalkii loogu magac daray Normandy, Faransiiska kaga xoreeyey Hitler iyo naazigii Jarmalka oo qabsaday dalkaas. Waa laba dal oo xiriir qoto dheer ka dhexeeyo, balse Maraykanka oo u jeestay dhinacaas iyo Aasiya si uu u xakameeyo Shiinaha ayaa mudnaanta siinaya furunta cusub ee indo- pacific ga.
Ka sokow Aukus, oo u taagan Australia, UK, US, Maraykanku wuxuu qayb ka yahay “sirdoonka shanta indhood” oo ah seddaxdan oo lagu daray New Zealand iyo Canada. Wuxuu kaloo qayb ka yahay “The Quadrilateral Security Dialogue” wada hadalka amni ee afar-geesoodka ah, waa Maraykanka , Australia, India iyo Japan ku wada jiraan iyo ANZUS oo ah heshiiska Millateri oo ay Austrlia, Zealand iyo US wada galeen 1951-dii.
Waa loolan cusub oo dagaal qabow ah, kaa soo beddeli doona wejiga siyaasadda arrimaha dibedda ee dunida. Tartanka quwadaha waawayn wuxuu inta badan fursad siiyaa dowladaha yaryar, sababtoo ah waxaa loolan iyo beratan loo gelayaa is-xulufaysi , is-gaashaanbuureysi iyo kasbashada saaxiibbo. Waxayse ku xiran tahay aragtida iyo faham ka hoggaamineed ee dal walba sida uu uga faa’iidaysan karo loolanka cusub iyo sida uu uga leexan karo.